Nepal Samaya | मोटरहेडका बाइक नेपाली बजारमा
मोटरहेडका बाइक नेपाली बजारमा
काठमाडौं– मोटरहेड मोटरसाइलको नेपालका लागि अधिकृत विक्रेता एसएलआर टेक्नो एण्ड ट्रेड प्रा.लि. (एसजी समूहको एक सहायक कम्पनी)ले विश्वमै परिचित अफ रोड मोटरसाइकलहरु चीनबाट आयात गरेर नेपालमा बिक्री गर्दै आएको छ।
एसएलआर टेक्नो एण्ड ट्रेडले मोटरहेड ब्रान्ड ५ वर्षदेखि नेपालको दुईपांग्रे बजारमा डर्ट सेगमेन्टको रूपमा परिचित गराएको छ। त्यस बाहेक कम्पनीले क्रसओभर र स्क्र्याम्बलर सेगमेन्टहरुलाई पनि लोकप्रिय बनाउन धेरै प्रयास गरेको छ।
मोटरहेड बाइक नेपालको सबै भू–भागको लागि उपयुक्त हुनुको साथै यसको फराकिलो र ठूलो टायर, उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स, प्रशंसनीय पिक अप, पावर र आरामको लागि परिचित रहेको कम्पनीको दाबी छ। अहिले बजारमा ७ वटा मोडल उपलब्ध छन्, जसको मूल्य २ लाख ९५ हजारदेखि ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँसम्म छ।
एसजी समूह सन् मा १९९६ मा शिवप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा स्थापित भएको थियो। यो समूहले निर्माण, ऊर्जा, एलपीजी ग्यास, सेवा, व्यापार, आतिथ्य, कृषि व्यवसाय, शिक्षा, मिडिया, बैंकिङ र निर्माण क्षेत्रमा व्यापार–व्यवसाय गरिरहेको छ।
एसजी समूह इटालियन मोटरसाइकल र स्कुटरको कम्पनी तारो मोटर्सको पनि आयातकर्ता हो।
प्रकाशित: September 19, 2021 | 12:34:03 काठमाडौं, आइतबार, असोज ३, २०७८
४७ वटा सहरमा पुग्यो दराज
ई–कमर्स कम्पनी दराजले देशका ४७ सहरमा सेवा विस्तार गरेको छ।
नर्भिकबाट डिस्चार्ज भए मोहन वैद्य
नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरण डिस्चार्ज भएका छन्।
सुनको मूल्य बढ्यो, आजको बजारभाउ कति?
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा चार सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९२ हजार एक सय रुपैयाँ कायम भएको हो।
डिशहोमको रिचार्जमा आकर्षक छुट
चाडवाडको यो मौसममा रिचार्ज कार्ड तथा विभिन्न डिजिटल माध्यम मार्फत डिशहोम रिचार्ज गर्दा ग्राहकहरुले आकर्षक बोनस पाउने भएका छन्।
सिटी एक्सप्रेसद्वारा पाँच जना लखपति विजेताहरुको नाम घोषणा
सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले सिटी आयो लखपति बनायो योजना अन्तर्गत पहिलो महिनाको पाँच भाग्यशाली विजेताको नाम घोषणा गरेको छ ।
सनराइज बैंकको १४औं वार्षिकोत्सवमा नेपाल बाल संगठनलाई सहयोग
सनराइज बैंकले आफ्नो १४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बाल मन्दिरलाई सहयोग गरेको छ।